सम्पदा पुनःनिर्माणबाट पछि हट्यो जर्मन विकास बैंक, कहाँ मिलेन कुरा ? – Banking Khabar
सम्पदा पुनःनिर्माणबाट पछि हट्यो जर्मन विकास बैंक, कहाँ मिलेन कुरा ?
जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) सम्पदा पुनःनिर्माण कार्यबाट पछि हटेको छ । विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भक्तपुरका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताबाट केएफडब्लू पछि हटेको हो ।
सम्पदा पुनःनिर्माण कार्यको प्रक्रियाका सम्बन्धमा नगरपालिका र दातृ निकायबीच सहमति हुन नसक्दा केएफडब्लू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो । सम्पदा पुनःनिर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कि अन्तर्रा्ष्ट्रिय टेण्डरबाट गर्ने भन्ने मुख्य विवादका कारण केएफडब्लू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो ।
सम्पदा पुनःनिर्माण स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय सीप र ज्ञानको प्रयोगमार्फत् गर्नुपर्ने अडान भक्तपुर नगरपालिकाले राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्रा्ष्ट्रिय टेण्डरमार्फत् गर्नुपर्ने अडान दातृ निकाय केएफडब्लूले राख्दै आएको थियो ।
जर्मन राजदूत शेफरले भक्तपुर नगरपालिका र केएफडब्ल्यूबीच परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका प्रमुख तीनवटा असमझदारीमध्ये पूजारी मठको पुनःनिर्माणमा स्टील रडको प्रयोग र कंक्रीट ढलान गर्न नहुने, उपभोक्ता समितिमार्फत पुनःनिर्माण कार्य गर्ने र भक्तपुर दरबारक्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदाहरु पुनःनिर्माण गर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय टेण्डर गर्दा समस्या हुने विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाको भावनालाई केएफडब्ल्यूले स्वीकार गर्न नसकेको बताए। उनले सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुरका जनताहरुको समर्पणभावको उच्च प्रशंसा गर्दै जनभावनाविपरित आफूहरु नजाने प्रष्ट पारे।
भक्तपुर र जर्मनी सरकारबीच जनस्तरमै प्रगाढ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत शेफरले नगरको हितमा कुनै पनि बखत सहयोग गर्न जर्मन सरकार तयार रहेको बताए। उनले सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुरको ज्ञान र प्रविधिबारे भविष्यमा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमै छलफल हुने र त्यसमा जर्मन सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग गर्न चाहेको बताए।
स्थानीय सीप, प्रविधि र परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिएका पाँचतले मन्दिर, ५५ झ्याले दरबार, भैरबनाथ मन्दिरलगायत धेरै सम्पदाहरु सयौँ वर्षसम्म जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले आफ्नै इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गरेर नयाँ पुस्तालाई स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने विषय अध्यापन गराइरहेको जानकारी दिए ।